Ifulethi elisha e-Asunción lihlome ngokuphelele - I-Airbnb
Ifulethi elisha e-Asunción lihlome ngokuphelele
Asunción, Paraguay, i-Paraguay
Ifulethi elihle eliseduze nenkaba yesikhungo sebhizinisi nezokuvakasha e-Asunción. Amabhulokhi ayi-10 ukusuka e-WTC, izindawo zokudlela eziningi, amabha, izitolo ezinkulu kanye nemizuzu eyi-10 ukusuka esikhumulweni sezindiza. Ukunikezwa okubanzi kwe-gastronomic nokuzijabulisa endaweni. Ihlonyiswe ngesitayela esiningi ukwenza ukuhlala kwakho kunethezekile, inama-TV angu-2, i-wifi, umbhede onethezeke kakhulu, yonke into yokupheka, yokupaka, njll. Isakhiwo sinethala kanye nezoso ezilungele ukuphumula. Uzothola nesitolo esikhulu samahora angama-24 eduze kakhulu! "
Ifulethi lisha sha, lifakwe ifenisha entofontofo nesimanje, izikhala zigcwele ukukhanya, zinomoya omuhle kakhulu, ukuze isivakashi sibe nesipiliyoni esingcono kakhulu sokuhlala kwaso. Imizuzu eyi-10 ukusuka esikhumulweni sezindiza. Imizuzu engama-20 ukusuka enkabeni yedolobha. Amabhulokhi angu-10 ukusuka enxanxatheleni yezitolo i-Paseo de La Galería. Izinsiza: * Ilondolo * Isitezi sebhilidi eline-grill * Isekhethi yezokuphepha yamahora angama-24 *Indawo yokupaka ngaphakathi kwesakhiwo.
"Indawo ephephe kakhulu futhi ethulile. Ukufinyelela kalula emigwaqweni emikhulu yedolobha, enenxanxathela yezitolo nezindawo zokudlela ezikude ngamaminithi. Eduze nezitolo ezinkulu zamahora angu-24."
"Njengomethuli wezinhlelo ngizotholakala ukuze ngiphendule imibuzo mayelana nomnyango noma izindawo eziseduze futhi ngikusize ngeziphakamiso ukuze usebenzise ngokunenzuzo ukuhlala kwakho edolobheni."